Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: စစ်အစိုးရကို ပိုဖိအားပေးရေး အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကုလကို တိုက်တွန်း
စစ်အစိုးရကို ပိုဖိအားပေးရေး အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်တွေ ကုလကို တိုက်တွန်း
The US women Senators urged UN chief Ban Ki-moon in an open letter to keep pressurring the Burmese military junta such as not moving forward elections plans and release Burma's democracy leader Aung San Suu Kyi immediately.
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ဆက်လျှက် ထိမ်းသိမ်းခံနေရတာကို အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့အတူ စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban-ki Moon) က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမျိုးသမီးအမတ်တွေက ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေမှုးချုပ်ဆီ ရေးသားပေးပို့တဲ့စာကို လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့  လက်ထောက်ပြောဆိုခွင့်ရှိသူ ဖာရန် ဟတ်ခ် () က ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းဆီ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့ စာကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် (California) အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဒိုင်ယန် ဖိုင်းစတိုင်း (Dianne Feinstein)၊ မယ်ရီလန်ပြည်နယ် (Maryland) အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘာဘရာ မီကူလ်စကီး (Barbara A Mikulski) နဲ့ အာကန်ဆော့ပြည်နယ် (Arkansas) အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဘလန်ချီ လင်ကွန်း (Blanche Lincoln) တို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ၂၀၀၁ ရွေးကောက်ပွဲ အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းဖို့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့လည်း အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကို အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
Posted by yahutha at 2:15 AM
Labels: သတင်း ဓါတ်ပုံ